Galuumsotaa fi Addaan fageenyaa
Galumsaa fi Addaan Fageenya
Galuumsaa fi addaan fageenya dirqalawwanii keewwataaf qindeessa.
Hangaa iddo gidduu bitaa fi mirga mudana fuulaa fi keewwataa irra darbamuu ifteessi.
Hanga iddoo kan keewwata mudana fuula irraa galumsa barbadde galchi yoo barbaadde keewwata gara mudana fuulaatti dheeressuiuf,lakkoofsa hi'eentaa galchi.Afaanota Bitaa irraa gara mirga keessa,qarreen bitaa keewwataa bitaa mudana fuulaa waliin galeera.Afaanota mirga gara bitaa keessaa qarreen mirga keewwataa mudana fuula mirga waliin galeera.
Hanga iddoo keewwata galumsa mudana fuula irraa barbaadde galchi keewwata gara mudana fuulaa keessatti dheeressuuf yoo barbaadde, lakkoofsa hi'eentaa galchi.Afaanota Bitaa gara mirgaatti keessa,mirgi qarree keewwataa mudana fuula mirgaa waliin ni galu. Afaanota mirgaa gara bitaa keessaa bataan qarree keewwataa muudana fuula bitaa waliin galeera.
Sarara jalqaba keewwataa hanga galchitee galcha. Galuumsa fannoouumuuf,gatii pozitiivii "BarNu duraa"fi gatii hi'eentaa "sarara jalqaba "galchi. Sarara jalqaba keewwataa galchuuf kan lakkoofsaa ykn rasaasa fayyaa "Dhangii-Rasaasa fi Lakkaawwii - qubannoo "fili."
Hangn iddoo gidduu keewwattafaa Dhiisuuf ifteessi.
Hanga iddoo gidduu keewwattotaa Dhiisuuf ifteessi.
Hanga iddoo kan gubbaa keewwatta (tootaa)gubbaa Dhiisuu barbaaddee galchi.
Addaan fageenya sarara
Hanga iddoo gubbaa keewwata (toora)filatame jalaadhiisuu barbaaddee galchi.
Dirqaala kanafili,ittaansuudhaan gatii dhibbeentaa sanduuqaakeessa galchii,bakka %100 sarara baqqee addaan fageenya walitti gala.
Sarara gadii addaan fageenya gara gatii kanatii sanduuqa keessaa qindeessa.
Hammamtaa bocquu adda addaa keewwataa waliin yoo fayyadamuu barbaadde,sararri addaan faggeenyaa ofumaanhammamtaa bocquuguddaatti sirreeffame.sararawwan maraaddaan fageenya walfakkaata yoo filtu, gatii xiqqaatee xiqqatuu kan hammamta bocquu gudaatti walitti galu keessa ifteessi.
Hojjaa iddoo surdaala kan sararawwan lama gidduutti sagame qindeessa.
Gatii sarara addaan fageeenyaaf fayyadu galchi.
Title is: Galuumsotaa fi Addaan fageenyaa